Nhau - PCB Kubatanidza BV Hires Bill van de G Friendt seKiyi yeAccount Manager
PCB Kubatanidza BV Hires Bill van de G Friendt seKiyi Akaunti Manager
Iine ruzivo rwakakura muPBB indasitiri, Bill van de G Friendt PCB Kubatanidza BV seMakiyi Akakosha Maki kumusika weDutch.
Nesimba rakasimba uye neruzivo rwakakura, ruzivo rwake rwakafara rwemakore gumi muPCB indasitiri uye makumi maviri neshanu mune zvemagetsi, kambani inoti Bill ichasimbisa chinzvimbo chayo uye inounza kuPCB Unganidzo maonero emusika. Unyanzvi hwake hunokosha hunomuita akakwana zvakakwana pachinzvimbo ichi.
"Ndakagamuchirwa neushamwari uye inzvimbo inoshamisa nevanhu vane ruzivo," anodaro Bill. “Ndiri kufara zvikuru kuona mikana iri musika nhasi. Iropafadzo kushanda mukambani yakaita sePCB Connect, uye ndinofanira kutaura kuti ndanga ndiri pachikwata chemakwikwi uye ndainzwa zvinhu zvakanaka kubva kune vatengi. ”
Kunyangwe kana ramangwana rakaoma kufungidzira nekuda kwedenda, Bill anotenda kuti "tiri munzvimbo yakanaka ine chekuita nezvekurapa. PCB Kubatanidza inoita basa rakakosha panguva yedambudziko iri. Ndine chokwadi chekuti nemhando yedu uye zvinhu zvakanaka zvasanganiswa, tiri mutambi akanaka. ”
John Kuitert, Managing Director paPCB Connect BV, anoti "Ndiri kufara zvikuru kugamuchira Bill kuchikwata. Anounza ruzivo rwakawanda, yakakosha network uye ruzivo rwechigadzirwa / musika, asi zvakare yakawanda simba uye kushinga - anozivikanwa kwazvo mubhizinesi. Pamwe chete naIris naSjoerd, avo vakabatana nesu mwedzi wapfuura, Bill achasimbisa timu yedu yeBenelux. Ndine chivimbo chekuti izvi zvinoita kuti vatengi vakoshese zvakanyanya. ”
PCB Kubatanidza BV yakavambwa muna 2010 uye nguva pfupi yadarika yakapemberera iri makore gumi-gore rekupa maPCB kumusika weDutch.